कब्जियतबाट छुटकारा पाउन हरेक बिहान के खाने ? | Ratopati
कब्जियतको समस्याबाट पीडित व्यक्तिहरुले हरेक बिहान खानेकुरामा ध्यान दिने गर्नुपर्छ । बिहान पेट सफा भएन भने दिनभर ताजा महसुस गर्न सकिदैन । पेट सफा नहुँदा छालासम्बन्धी समस्याहरु पनि आउने गर्छन् । तर, आफ्नै जीवनशैलीका कारण कब्जियतको समस्या हुने गर्छन् । त्यसैले हरेक बिहान के खाने त ?
कागतीले शरीरमा भएको बिकार तत्वलाई बाहिर फाल्ने काम गर्छ । कहिलेकाँही कब्जियतको समस्या भएमा एक गिलास तातोपानीमा एउटा कागतीको रस मिसाएर त्यसमा एक चम्चा मह हाल्ने र पिउने गर्दा कब्जियतको समस्या कम हुँदै जान्छ ।
दूध र दही
कब्जियतको समस्याबाट छुटकारा पाउनका लागि पेटमा राम्रो ब्याक्टेरिया पनि हुन आवश्यक छ । दहीमा प्रोबायोटिक हुन्छ त्यसैले हरेक दिन एक कप दही खाने गर्नुपर्छ । यसका साथै, कब्जियतबाट छुटकारा पाउनका लागि एक गिलास दूधमा २ चम्चा घ्यू हालेर राति सुत्नुअघि पिउने गर्दा कब्जियतको समस्या कम हुन्छ ।
एक दिनमा महिलाका लागि २५ ग्राम फाइबर खान आवश्यक छ । भने एक पुरुषले ३५ ग्राम फाइबर खान आवश्यक छ । त्यसैले हरेक दिन फाइबरयुक्त खाना खान आवश्यक छ । जसले कब्जियतको समस्या कम हुन्छ ।
सुत्नुअघि ३ वटा त्रिफलाको चक्की तातोपानीसँग पिउनुपर्छ । त्रिफला पेटका लागि आवश्यक छ । यसलाई रातिमा सेवन गर्न सकिन्छ ।
सुनको मूल्य स्थिर, चाँदीको मूल्य ११ सय रुपैयाँ भन्दा तल झर्यो
प्रधानन्यायाधीशलाई बिदामा बसेर कार्यवाहक तोक्न गठबन्धनको सुझाव